Mampiakatra ny fitombenana
Handrafitra ny fitombenanana hidongona sy ho voarafitra ho lasa boribory tsara ireto fampihetseham-batana manaraka ireto :
Mila seza na ankalana avoavo ity fampihetseham-batana ity. Mijoro manoloana ilay seza na ankalana dia atao eo amboniny ny tongotra havanana, aforitra ny lohalika. Ampiakarina eo amboniny mihitsy ny vatana avy eo ka io tongotra havanana io no itehenana sady atsotra dia ny tongotra havia kosa indray no aforitra miakatra. Iny tongotra havia iny no alefa mankany aoriana avy eo sady aforitra hanakaiky ny tany ny lohalika. Ny tongotra havanana kosa averina amin’ny tany. Izay fihetsika izay no averina in-20 dia atao toy izany koa ny lafy ilany. Manao andiany 3.
Mila “elastique” natokana hanaovana fampihetseham-batana eto. Raha tsy manana izany dia azo atao amin’izao ihany saingy mihena ny herin’ilay fampihetseham-batana. Mitsilany amin’ny tany dia aforitra ny lohalika, akambana ny tongotra roa. Atao eo amin’ny fe ilay “elastique”. Sokafana ny fe dia akarina amin’izay farany takatra ny valahana avy eo dia averina amin’ny paozy niaingana. Averina in-20 izay. Manao andiany 3.
Fampihetseham-batana fahatelo farany
Mila akalana roa sy zavatra mavesabesatra iray indray eto. Apetraka eo amin’ny ankalana tsirairay ny tongotra. Tazonina amin’ny tanana roa ilay zavatra mavesatra. Atondrondra ny fitombenana sady aforitra ny lohalika dia miverina amin’ny paozy niaingana dia sady atondrotra ny fitombenana no miondrika indray. Izay fihetsika roa mifandimby izay no averina in-20. Manao andiany 3 ihany koa.
Aza adinoina ny manafana tena tsara mialohan’ ny hanaovana ny fampihetseham-batana. Tokony hanao “etirements” tsara koa rehefa vita izany.
Isaorana coach Josy avy ao amin’ny Art Sport Fitness Andrefan’Ambohijanahary nanolotra ny fampihetseham-batana anio. Fifandraisana :0340399035